မိဘက လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုအပ်သည် ဖြစ်စေ လုပ်ကျွေးဖြစ်အောင် လုပ်ကျွေးကြပါ - Lucky9
Homepage / Knowledge / မိဘက လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုအပ်သည် ဖြစ်စေ လုပ်ကျွေးဖြစ်အောင် လုပ်ကျွေးကြပါ
“ဆရာကြီး …သမီး သီတင်းကျွတ် လာကန်တော့တာပါရှင့်” “ကျေးဇူးပါ..သာဓုပါကွယ်… အိမ်မှာ အဖေနဲ့အမေ ရှိသေးလား.. သူတို့ကိုရော ကန်တော့ပြီးပြီလား” “ဟုတ်..ကန်တော့မှာပါ” “သမီးလခ ဘယ်လောက်ရသလဲ” “၃သိန်း -၄ သိန်းရပါတယ်” “မိဘ ကို တစ်လ ဘယ်လောက် ကန်တော့လဲ” ” လစဉ်တော့မကန်တော့ဖြစ်ဘူးဆရာ..အခုလို သီတင်းကျွတ် .. သင်္ကြန်ဆိုရင်တော့ ကန်တော့ဖြစ်ပါတယ်..”
” လျှာရှည်တယ် စပ်စုတယ်တော့ မထင်နဲ့.. တစ်ခါကန်တော့ရင် ဘယ်လောက်ကန်တော့လဲ” ” လေးသောင်း/ငါး သောင်းလောက်တော့ ကန်တော့ဖြစ်ပါတယ်” ” တစ်နှစ်မှာ နှစ်ခါ သုံးခါ ထားပါတော့ တစ်နှစ်ကို ၁သိန်း/၂ သိန်းပေါ့… တစ်ရက်မှာ သမီး ၄၀၀/ ၅၀၀ ကျပ်လောက် ကန်တော့တယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အင်း ..လဘက်ရည်တစ်ခွက် ဘယ်လောက်လဲ” ” ၅၀၀ လောက်ဖြစ်နေပြီဆရာ” “သမီး မိဘကို တစ်ရက်ကို လဘက်ရည်တစ်ခွက် ဘိုး ကန်တော့သလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ သမီးကို ဒီအရွယ်အထိ ထမင်းမကျွေးခဲ့တဲ့နေ့ရှိလား။ ကျောင်းလည်းထား..အဝတ်အစားလည်းဆင်. .နေမကောင်းလဲဆေးကုပေး .. ထမင်းလဲကျွေး မုန့်လဲကျွေး ဟုတ်တယ်နော် အနှစ်၂၀ ကျော်နေပြီ… သမီး သူတို့ကို ဘယ်နှစ်နှစ်များ ပြန်လုပ်ကျွေး ရသေးလို့လဲ…လဘက်ရည်တစ်ခွက်ဖိုးလောက် ပြန်လုပ်ကျွေးရတာကို တော်တော် ပင်ပန်းနေပြီ ဟုတ်လား…ခက်ခဲနေပြီ ဟုတ်လား”
” သမီးက ပေးတယ်..အမေတို့က မယူတာ.. မုန့်တွေစားချင်တာတွေတော့ ဝယ်ပေးပါသေးတယ်” “စိတ်မဆိုးနဲ့နော်..သမီးမိဘက ဘောစိလား” “မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်..မရှိလို့ အခုလို တနယ်တကျေး မိဝေးဖဝေး အလုပ်လုပ်နေရတာပေါ့..သမီးလဲ တစ်လတစ်လ မလောက်ဘူး” “တစ်လ ၃သိန်း/၄ သိန်းဆိုတာ ဆရာတို့ အိမ်မက်တောင် မ မက်ခဲ့ဘူးတဲ့လစာ။ ဒါကို မလောက်ရင် လောက်အောင် သုံးနိုင်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စီမံခန့်ခွဲ ရမယ်လေ.. မိဘက မလိုလို့မယူတာမဟုတ်ဘူး.. မယူရက်လို့ မယူတာ.. လိုချင်တာ ဝယ်ပေးတာထက် သမီး ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံလေး ကိုင်ချင်တာပေါ့။ ပြောမထွက်ရက်လို့သာ။
သူလိုချင်တာ သူစားချင်တာ သူသောက်ချင်တဲ့ဆေး သူ့ပိုက်ဆံနဲ့သူဝယ်ချင်တာ… အိမ်ကိုကြွတဲ့ ဆွမ်းခံကိုယ်တော်ကို သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ ဝတ္ထု ကပ်လှုချင်တာ.. ဘုရားကိုသူ့ငွေနဲ့သူ လှုချင်တာ။ သူ့မြေးတွေကို သူကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနဲ့ မုန့်ဖိုးပေးချင်တာ။ အဲဒါကြောင့် သူ့လက်ထဲကို ငွေ ထည့်ပေးထားပါ။ သမီး ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးပေး ငွေလဲ ကန်တော့ပါ။ သမီး တစ်လ ဖုန်းဘီလ် ဘယ်လောက်ကုန်လဲ” “၃သောင်း-၄ သောင်း။ ” အဲဒီငွေထဲက တစ်လ ၁၀၀၀၀ လောက် ပိုအောင်စုကြည့်ပါ။ မိဘကို လစဉ်ပုံမှန်ကန်တော့ကြည့်ပါ။ တခါတည်း တစ်သိန်းကန်တော့တာထက် တစ်လတစ်ခါ ၁၀၀၀၀-၂၀၀၀၀ ကန်တော့ရတာ ကန်တော့ရတဲ့ သမီးလဲ ပေါ့ပါးတယ်။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ဖူးပေါ့။ လစဉ်မှန်မှန် ကန်တော့တဲ့အတွက် မိဘလဲ သမီးကန်တော့မဲ့ငွေ ၆လ တစ်နှစ် စောင့်စရာ မလိုပဲ အဆင်ပြေပြေရတယ်။ သုံးချင်တာလေးတွေလဲ သုံးချင်တဲ့အချိန် သုံးရတော့ကျေနပ်တာပေါ့”
“ဆရာ ရှင်းပြတော့မှ အမေတို့ကို သနားလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။ သမီးကန်တော့တာ လဘက်ရည်တစ်ခွက်ဖိုးလောက်ပဲ ရှိတာပါလား” ကလေးမလေး မျက်ရည်တွေ ဝိုင်းလာသည်။ ” သမီး နေ့တိုင်း အပြင်မှာ ထမင်းစားရတယ်ဟုတ်လား။ အနည်းဆုံးတစ်နပ် ကို တစ်ထောင် ထားပါ။ တစ်နေ့ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ ပဲ ။ သမီးမှာ ချစ်သူရှိရင် ဆိုင်ကောင်းကောင်းစားရတာနဲ့ လည်ပတ်ရတာနဲ့ သူ့မွေးနေ့ကိုယ့်မွေးနေ့ လက်ဆောင်တွေပေးရတာနဲ့ valentine day ဆိုရင် လက်ဆောင်ပေးရတာနဲ့ နေ့တိုင်းညတိုင်း ဖုန်းတွေပြောရတာနဲ့ … အားပါးပါး ကုန်လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံတွေ… အဲဒီအချိန်မှာ သမီး မိဘက သမီးပေးတဲ့ လဘက်ရည်တစ်ခွက်ကို နှစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်တစ်ဝက် သောက်နေရတာနော်..
မုန့်မပါဘူး။ ထမင်း ဟင်းမပါသေးဘူး ..ဆိုတာလေး မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သမီး တစ်လ ၃/၄ သိန်း ကုန်တယ်ဆို တစ်ရက် တစ်သောင်း နှုန်းလောက် သုံးနေတဲ့အထဲမှာ မိဘအတွက် ၄၀၀/၅၀၀ ပဲ ပါနေသေးတယ် လဘက်ရည်တစ်ခွက်ဖိုးပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ မြင်တွေးကြည့်လိုက်ပါ” ကလေးမလေး မျက်ရည်တွေ ကျလာသည်။ ” သမီးမိဘက အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီး သမီးကို တစ်ရက်ကလေး အငတ်ထားခဲ့ဘူးသလား” ကလေးမလေး အသံမထွက်တော့။ခေါင်းခါပြသည်။
“သမီး ..အခု မိဘကို အငတ်ထားသလို ဖြစ်နေပြီနော်။ မိဘ ဆိုတာ မသေခင်လုပ်ကျွေးရတာ။ သေပြီးမှတော့ ငိုပြမနေတော့နဲ့။ ဖေ့ဘွတ်မှာ “ I love my mom “ “ I love my Dad “ လောက်ကို ကျေးဇူးဆပ်တယ်ထင်မနေနဲ့။ သူတို့မစားနိုင်အိပ်ယာပေါ်က မထနိုင်တော့တဲ့ အချိန်မှလည်း ကျွေးမနေတော့နဲ့။ ဆရာ့ရဲ့ သီတင်းကျွတ် လက်ဆောင်ကတော့ ” မိဘကို အမြန်ဆုံး လုပ်ကျွေးပါ” လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ် သမီးရေ” ကလေးမလေး ငိုချတော့သည်။
” ကဲ…အခုလို ဆရာ့ကို ကန်တော့ရသော အကျိုးအားကြောင့် မိဘကို အလုပ်အကျွေးပြုနိုင်သော သမီးကောင်းရတနာ တစ်ဦး ဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်” မိဘက လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ လုပ်ကျွေးဖြစ်အောင် လုပ်ကျွေးကြပါ။ အမြန်ဆုံးလုပ်ကျွေးပါ။ တတ်နိုင်သမျှ များများ လုပ်ကျွေးပေးကြပါ။ မလုပ်ကျွေးရသေးတဲ့လူတွေလဲ မြန်မြန် လုပ်ကျွေးကြပါ။ လုပ်ကျွေးနေတဲ့ လူတွေလဲ ယခုထက်ပိုပြီး များများလုပ်ကျွေးကြပါ။ “ကျွန်တော် / ကျွန်မ တို့ အများကြီး ကြိုးစားရပါဦးမည်” သင်ဖတ်ပြီးလို့ လက်ခံတယ်ဆိုရင်အများသူငှါ အသ်တိုးစေဖို့မေတ္တာဖြင့် ဖြန့်ဝေပါအုံးနော် ။
“ဆရာကွီး …သမီး သီတငျးကြှတျ လာကနျတော့တာပါရှငျ့” “ကြေးဇူးပါ..သာဓုပါကှယျ… အိမျမှာ အဖနေဲ့အမေ ရှိသေးလား.. သူတို့ကိုရော ကနျတော့ပွီးပွီလား” “ဟုတျ..ကနျတော့မှာပါ” “သမီးလခ ဘယျလောကျရသလဲ” “၃သိနျး -၄ သိနျးရပါတယျ” “မိဘ ကို တဈလ ဘယျလောကျ ကနျတော့လဲ” ” လစဉျတော့မကနျတော့ဖွဈဘူးဆရာ..အခုလို သီတငျးကြှတျ .. သွင်ျကနျဆိုရငျတော့ ကနျတော့ဖွဈပါတယျ..”
” လြှာရှညျတယျ စပျစုတယျတော့ မထငျနဲ့.. တဈခါကနျတော့ရငျ ဘယျလောကျကနျတော့လဲ” ” လေးသောငျး/ငါး သောငျးလောကျတော့ ကနျတော့ဖွဈပါတယျ” ” တဈနှဈမှာ နှဈခါ သုံးခါ ထားပါတော့ တဈနှဈကို ၁သိနျး/၂ သိနျးပေါ့… တဈရကျမှာ သမီး ၄၀၀/ ၅၀၀ ကပျြလောကျ ကနျတော့တယျ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အငျး ..လဘကျရညျတဈခှကျ ဘယျလောကျလဲ” ” ၅၀၀ လောကျဖွဈနပွေီဆရာ” “သမီး မိဘကို တဈရကျကို လဘကျရညျတဈခှကျ ဘိုး ကနျတော့သလိုဖွဈနတောပေါ့။ သမီးကို ဒီအရှယျအထိ ထမငျးမကြှေးခဲ့တဲ့နရှေိ့လား။ ကြောငျးလညျးထား..အဝတျအစားလညျးဆငျ. .နမေကောငျးလဲဆေးကုပေး .. ထမငျးလဲကြှေး မုနျ့လဲကြှေး ဟုတျတယျနျော အနှဈ၂၀ ကြျောနပွေီ… သမီး သူတို့ကို ဘယျနှဈနှဈမြား ပွနျလုပျကြှေး ရသေးလို့လဲ…လဘကျရညျတဈခှကျဖိုးလောကျ ပွနျလုပျကြှေးရတာကို တျောတျော ပငျပနျးနပွေီ ဟုတျလား…ခကျခဲနပွေီ ဟုတျလား”
” သမီးက ပေးတယျ..အမတေို့က မယူတာ.. မုနျ့တှစေားခငျြတာတှတေော့ ဝယျပေးပါသေးတယျ” “စိတျမဆိုးနဲ့နျော..သမီးမိဘက ဘောစိလား” “မဟုတျပါဘူးဆရာရယျ..မရှိလို့ အခုလို တနယျတကြေး မိဝေးဖဝေး အလုပျလုပျနရေတာပေါ့..သမီးလဲ တဈလတဈလ မလောကျဘူး” “တဈလ ၃သိနျး/၄ သိနျးဆိုတာ ဆရာတို့ အိမျမကျတောငျ မ မကျခဲ့ဘူးတဲ့လစာ။ ဒါကို မလောကျရငျ လောကျအောငျ သုံးနိုငျအောငျ ကိုယျ့ကိုယျကို စီမံခနျ့ခှဲ ရမယျလေ.. မိဘက မလိုလို့မယူတာမဟုတျဘူး.. မယူရကျလို့ မယူတာ.. လိုခငျြတာ ဝယျပေးတာထကျ သမီး ပေးတဲ့ ပိုကျဆံလေး ကိုငျခငျြတာပေါ့။ ပွောမထှကျရကျလို့သာ။
သူလိုခငျြတာ သူစားခငျြတာ သူသောကျခငျြတဲ့ဆေး သူ့ပိုကျဆံနဲ့သူဝယျခငျြတာ… အိမျကိုကွှတဲ့ ဆှမျးခံကိုယျတျောကို သူ့ကိုယျပိုငျငှနေဲ့ ဝတ်ထု ကပျလှုခငျြတာ.. ဘုရားကိုသူ့ငှနေဲ့သူ လှုခငျြတာ။ သူ့မွေးတှကေို သူကိုယျပိုငျပိုကျဆံနဲ့ မုနျ့ဖိုးပေးခငျြတာ။ အဲဒါကွောငျ့ သူ့လကျထဲကို ငှေ ထညျ့ပေးထားပါ။ သမီး ဘာတှဖွေညျ့ဆညျးပေးပေး ငှလေဲ ကနျတော့ပါ။ သမီး တဈလ ဖုနျးဘီလျ ဘယျလောကျကုနျလဲ” “၃သောငျး-၄ သောငျး။ ” အဲဒီငှထေဲက တဈလ ၁၀၀၀၀ လောကျ ပိုအောငျစုကွညျ့ပါ။ မိဘကို လစဉျပုံမှနျကနျတော့ကွညျ့ပါ။ တခါတညျး တဈသိနျးကနျတော့တာထကျ တဈလတဈခါ ၁၀၀၀၀-၂၀၀၀၀ ကနျတော့ရတာ ကနျတော့ရတဲ့ သမီးလဲ ပေါ့ပါးတယျ။ ဝနျထုပျဝနျပိုးမဖွဈဖူးပေါ့။ လစဉျမှနျမှနျ ကနျတော့တဲ့အတှကျ မိဘလဲ သမီးကနျတော့မဲ့ငှေ ၆လ တဈနှဈ စောငျ့စရာ မလိုပဲ အဆငျပွပွေရေတယျ။ သုံးခငျြတာလေးတှလေဲ သုံးခငျြတဲ့အခြိနျ သုံးရတော့ကနြေပျတာပေါ့”
“ဆရာ ရှငျးပွတော့မှ အမတေို့ကို သနားလိုကျတာ။ဟုတျတယျနျော။ သမီးကနျတော့တာ လဘကျရညျတဈခှကျဖိုးလောကျပဲ ရှိတာပါလား” ကလေးမလေး မကျြရညျတှေ ဝိုငျးလာသညျ။ ” သမီး နတေို့ငျး အပွငျမှာ ထမငျးစားရတယျဟုတျလား။ အနညျးဆုံးတဈနပျ ကို တဈထောငျ ထားပါ။ တဈနေ့ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ ပဲ ။ သမီးမှာ ခဈြသူရှိရငျ ဆိုငျကောငျးကောငျးစားရတာနဲ့ လညျပတျရတာနဲ့ သူ့မှေးနကေို့ယျ့မှေးနေ့ လကျဆောငျတှပေေးရတာနဲ့ valentine day ဆိုရငျ လကျဆောငျပေးရတာနဲ့ နတေို့ငျးညတိုငျး ဖုနျးတှပွေောရတာနဲ့ … အားပါးပါး ကုနျလိုကျတဲ့ပိုကျဆံတှေ… အဲဒီအခြိနျမှာ သမီး မိဘက သမီးပေးတဲ့ လဘကျရညျတဈခှကျကို နှဈယောကျဆို တဈယောကျတဈဝကျ သောကျနရေတာနျော..
မုနျ့မပါဘူး။ ထမငျး ဟငျးမပါသေးဘူး ..ဆိုတာလေး မကျြစိထဲ မွငျယောငျကွညျ့လိုကျပါ။ သမီး တဈလ ၃/၄ သိနျး ကုနျတယျဆို တဈရကျ တဈသောငျး နှုနျးလောကျ သုံးနတေဲ့အထဲမှာ မိဘအတှကျ ၄၀၀/၅၀၀ ပဲ ပါနသေေးတယျ လဘကျရညျတဈခှကျဖိုးပဲ ရှိသေးတယျဆိုတာ မွငျတှေးကွညျ့လိုကျပါ” ကလေးမလေး မကျြရညျတှေ ကလြာသညျ။ ” သမီးမိဘက အဆငျမပွလေို့ဆိုပွီး သမီးကို တဈရကျကလေး အငတျထားခဲ့ဘူးသလား” ကလေးမလေး အသံမထှကျတော့။ခေါငျးခါပွသညျ။
“သမီး ..အခု မိဘကို အငတျထားသလို ဖွဈနပွေီနျော။ မိဘ ဆိုတာ မသခေငျလုပျကြှေးရတာ။ သပွေီးမှတော့ ငိုပွမနတေော့နဲ့။ ဖဘှေ့တျမှာ “ I love my mom “ “ I love my Dad “ လောကျကို ကြေးဇူးဆပျတယျထငျမနနေဲ့။ သူတို့မစားနိုငျအိပျယာပျေါက မထနိုငျတော့တဲ့ အခြိနျမှလညျး ကြှေးမနတေော့နဲ့။ ဆရာ့ရဲ့ သီတငျးကြှတျ လကျဆောငျကတော့ ” မိဘကို အမွနျဆုံး လုပျကြှေးပါ” လို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ သမီးရေ” ကလေးမလေး ငိုခတြော့သညျ။
” ကဲ…အခုလို ဆရာ့ကို ကနျတော့ရသော အကြိုးအားကွောငျ့ မိဘကို အလုပျအကြှေးပွုနိုငျသော သမီးကောငျးရတနာ တဈဦး ဖွဈပါစေ လို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ” မိဘက လိုအပျသညျဖွဈစေ မလိုအပျသညျဖွဈစေ လုပျကြှေးဖွဈအောငျ လုပျကြှေးကွပါ။ အမွနျဆုံးလုပျကြှေးပါ။ တတျနိုငျသမြှ မြားမြား လုပျကြှေးပေးကွပါ။ မလုပျကြှေးရသေးတဲ့လူတှလေဲ မွနျမွနျ လုပျကြှေးကွပါ။ လုပျကြှေးနတေဲ့ လူတှလေဲ ယခုထကျပိုပွီး မြားမြားလုပျကြှေးကွပါ။ “ကြှနျတျော / ကြှနျမ တို့ အမြားကွီး ကွိုးစားရပါဦးမညျ” သငျဖတျပွီးလို့ လကျခံတယျဆိုရငျအမြားသူငှါ အသျတိုးစဖေို့မတ်ေတာဖွငျ့ ဖွနျ့ဝပေါအုံးနျော ။
Previous post လေးစားရမဲ့ ပညာရှင်တစ်ဦး (သို့) မြန်မာမဟုတ်တဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ်ရဲ့ ဖခင်ကြီး
Next post သင်က အချစ်စစ်ကိုသာ ပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိသာစေတဲ့အချက်များ